Nkọwa pụrụ iche na nkasi obi nke akwa akwa - Ngwa ụlọ - mmụọ nsọ
Ọdịiche pụrụ iche na nkasi obi nke akwa akwa
2 March, 2019 Ọnwa Abụọ 16, 2021 admin Ndina akwa abụọ, Ime ụlọ nke oge a, Akwa, Ime ụlọ
Akwa dị n’elu abụghị ihe mgbe ochie. Ha ka na-ewu ewu. You ga-achọpụta ihe kpatara nke a na ihe ị ga-eche ma ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta ha n'isiokwu na-esonụ.
Ulo elu ulo bu ihe ntinye n'omume ejiji nke imewe ime. Nke a na-emetụtakwa akwa dị n'ime ime ụlọ. Ulo okpukpu abụọ e mechiri emechi na-enye ime ụlọ ahụ ihe mara mma. A ga-ekpuchi akwa niile ma ọ bụ naanị isi isi. Ekike mbụ nke isi ahụ pụtara na ime ụlọ ọ bụla. Nwere ike ịhọrọ site n'ụdị dị iche iche. Nwere ike ịhọrọ akwa okpukpu abụọ ejiri akwa isi dị elu ma chọọ mma. Ma ọ bụ obere ọkpọiso nwere ụkpụrụ dị mfe. Ọ dabere na uto gị yana arịa ụlọ niile nke ụlọ ahụ. Ga-enwe ekele maka ọrụ bara uru nke ọkpọiso egosiri elu. Karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ na akwa.
Ogo nke ihe
Mgbe ị na-azụ ihe, gbaa mbọ hụ na ụdị akwa dị elu ejiri mee. Ha ekwesịghị ịbụ naanị ihe na-enye obi ụtọ imetụ aka, kamakwa na-eguzogide abrasion. Ihe bara uru bu ohere nke nhicha di mfe. Ike nke ihe owuwu ahụ dịkwa mkpa. Ihe kachasị mma bụ osisi. Ulo elu nke okpukpu abụọ nke eji osisi rụọ nwere ogologo ndụ ọrụ. Ha siri ike ma kwụsie ike. Ihe ọghọm ha nwere ike ịbụ ọnụ ahịa dị elu. Ulo okpukpu okpukpu okpukpu okpukpu okpukpu okpukpu asa bu ihe di nma. Enweghi nsogbu nke ndụ dị mkpirikpi na-akwụ ụgwọ site na ọnụ ala ha.
Elsdị, agba na usoro
Mgbe ị na-azụ akwa akwa, ị nwere nhọrọ nke ọtụtụ ụdị. Ha dị iche na akụkụ nke akwa, ụdị osisi eji ya na imewe. Ha dịkwa iche na usoro nke mkpuchi. Mgbe ịzụrụ, ị nwere ike ịhọrọ nchikota nke ndo dị ike. Adị akwa dị otú ahụ ga-abụ ihe kachasị mkpa, nke ga-ekpebi ntuziaka maka akụrụngwa ndị ọzọ n'ime ụlọ ahụ. I nwekwara ike ịkụ nzọ na ịdị mfe. Ulo okpukpu abụọ nke e mechiri emechi na nchikota nke agba agba agba agba agba agba agba imeju ime ụlọ maka ọtụtụ ngwa.
You ga-ahụ a dum nhọrọ nke àgwà abụọ akwa na onye na-ere ahia EBE A.
akwa akwa kacha mma na-ere akwa akwa abụọ akwa akwa
Inimitable rattan arịa ụlọ
Sitnọdụ ala na mbara ala